Elegant Glamour Bedroom Living Room Velvet bedspread-HF29027, China Elegant Glamour Bedroom Living Room Velvet bedspread-HF29027 Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Efitra fandraisam-bahiny misy efitrano fandraisam-bahiny mihaja volomparasy-HF29027
Model Number: HF29027
Supply Fahaiza-: 70000-75000set / volana
GLAMOROUS COMFORTER - Namboarina tamin'ny alàlan'ny velvet poly buttery premium eo anoloana ary mikrofibera malefaka ao ambadika ho an'ireo alina mangatsiaka sy ririnina. Lamba avo lenta mba hitazonana hafanana sy hafanana mandritra ny taona. Ny lambam-pandriana amin'ny patchwork dia mamela ny efitranonao ho tena milamina sy mamirapiratra. Ny aingam-panahy dia lambam-pandriana mihaja tsy manam-paharoa miaraka amin'ny endrika maoderina vaovao mifanaraka tsara amin'ny trano maoderina sy nentim-paharazana. Ireo lambam-pandriana tsara tarehy ireo dia azo antoka fa hanome endrika vaovao mahavariana amin'ny efitrano fatoriana ary hanome fahatsapana malefaka sy fampiononana.
LAVISH DESIGN & Colours - 100% microfiber ho an'ny fahalemem-panahy maharitra sy fialan-tsasatra farany miaraka amin'ny fanoherana ny hatsarana sy ny tasy noho ny landihazo - Hypoallergenic coverlet dia hitazona ny vatanao ho madio. Izy io dia manana ny fijeriny somary ambany, monochromatic ary mitondra singa amin'ny antsipiriany sy fahaizany ao amin'ny efitrano..Ny farafara fandriana dia maivana ampiasaina amin'ny toetr'andro mafana, fa mitazona azy ihany koa amin'ny alina mangatsiaka.
SELECTION MICROFIBER PREMIUM
STYLE TSY TANTARA TSARA
Fampiononana mandritra ny vanim-potoana amin'ny famolavolana endrika
Jiro sy malefaka
Mora be izao ny hikarakara azy ity. Izy io dia azo soloina amin'ny masinina amin'ny rano mangatsiaka miaraka amin'ny loko mitovy amin'izany. Atsofohy amin'ny hafanana ambany. Aza mamotsy - Tsy Mihena - Tsy Mihemotra !! Namboarina haharitra ela be raha tazonina tsara.
TONDRO malefaka sy mahazo aina
Ny kalitao avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra. Ny vokatray dia misy kalitao avo lenta avo indrindra miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa 100%. Fikarakarana mora sy mora amin'ny hoditra. Ny lambam-pandriana ataontsika dia safidy mety indrindra hanatsarana ny fandrianao hatramin'ny fiasa mahomby.
Voasarimakirana Duvet Cover 3 Pieces Set Leaf Pattern Printed Soft Cotton Comforter Cover